Brazil oo u gudubtay wareega xiga ee siddeeda koobka aduunka 2018 kadib markii ay guul ka gaareen Mexico – Gool FM
Brazil oo u gudubtay wareega xiga ee siddeeda koobka aduunka 2018 kadib markii ay guul ka gaareen Mexico
(Russia) 02 Luulyo 2018. Xulka qaranka Brazil ayaa gaaray wareega siddeed dhamaadka koobka adduunka 2018 kadib markii ay ka gudbeen dhigooda Mexico 2-0.
Kulanka ayaa ku bilaawday qaab waali ah, iyadoo labada dhinac ay si xoogan isku weerareen, xulka Mexico ayaa iska cabin xoogan kala hor tagay dhigiisa Brazil.
Kulanka ayaa qeybtiisa hore ay ku kala nasteen labada xul Brazil iyo Mexico barbaro 0-0.
Qeybtii dambe marka dib leysugu soo laabtay ayay sheeko halkeeda kasii socotay waxayna labada dhinac sameeyeen weeraro gaadmo ah, xulka qaranka Samba ayaa sameeyay inta kulanka uu socday isku dayo muhiim ah.
Xulka qaranka Brazil ayaa ku hormaray goolka waxaana u dhaliyay daqiiqadii 51-aad ee qeybtii labaad ciyaarta xidigooda koowaad ee Neymar Jr kadib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis Willian.
daqiiqadii 86-aad xulka Mexico ayaa ku dhawaaday inuu ciyaarta ka dhigo barbaro,kadib markii uu fursad ku helay Javier Hernandez balse goolhaaye Alisson Becker ayaa fursadaas ka diiday,
laakiin wax walba waxay is badaleen daqiiqadii 89-aad kadib markii uu Roberto Firmino oo markaas badal ku soo galay ciyaarta ka dhigay 2-0, kadib baas qurux badan uu ka helay xidiga kooxda PSG Neymar Jr.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay guusha ku raacday xulka qaranka Brazil oo u kudbay wareega xiga ee siddeed dhamaadka koobka aduunka 2018.
Carlo Ancelotti oo isha ku haya xidig ka tirsan kooxda Paris St Germain
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Brazil ay garaacday Mexico?